Antananarivo Mihoampampana ny havoretrana sy ny gaboraraka
Tena mahazo vahana ny havoretrana sy ny gaboraraka eto Antananarivo.
Ankoatra ireo mpivarotra eny Anosy sy Mahamasina izay toa lasa tsenabe mihitsy isan’andro dia tsy lazaina intsony ny loto miparitaka etsy sy eroa. Anisan’ny efa voaresaka ary mbola resahina matetika ny eny Anosibe sy ny manodidina izay tena foiben’ny maloto tokoa. Tsy henatra tsy tahotra intsony mantsy ireo mponina eny an-toerana manary maloto eny amin’ny arabe izay tena mivangongo be tokoa. Raha araka ny fitarainan’ireo mpampiasa lalana eny an-toerana dia mila tsy ho azo diavin-tongotra intsony ny eny an-toerana no sady mamofona, miampy ireo mpandoko na mpanamboatra fiara mibahana etsy sy eroa. Antso avo araka izany no hatao amin’ireo lehiben’ny faritra na Fokontany eny an-toerana mba hijery akaiky ity loto sy gaborakaka eny Anosibe ity.Marihina moa fa na inona na inona asa fanamboarana foto-drafitrasa hatao eto amintsika raha mbola voretra sy tsy mahay manaja izany ny mpiray monina dia zava-poana ihany izany. Tena fahavalon'ny arabe ny rano ohatra kanefa manerana ny tanàna dia feno olona manipy ranon-dolana sy rano maloto amin'ny arabe. Tsy mahagaga intsony araka izany raha simba foana ny lalana eto amintsika sady maimbo ny tanàna.